Dhageyso : Sheekh Ayman Al-Dawaahiri oo kalimad cusub jeediyay. – Shabakadda Wararka Amiirnuur
Dhageyso : Sheekh Ayman Al-Dawaahiri oo kalimad cusub jeediyay.
January 7, 2017 7:05 pm by admin Views:
Hogaamiyaha Mujaahidiinta Al-Qaacidda Dr Sheekh Ayman Al-Dawaahiri ayaa jeediyay Kalimad Maqal ah oo uu kaga hadlay arrimo kala duwan, waxayna kalimaddani qeyb ka tahay sil-siladda “رسائل مختصرة” oo horey qeybo ka mid ah ay u faafisay Mu’assasada As-saxaab.
Halkan Ka Daawo Kalimadda Sheekha
videoga waa laga saarey barta youtubeka ee iyadoo maqal inoo soo gudbiya
Asc abu Caaliya wan dareemi karaa sheekh ayman xaalada meesha ay ka mareyso.
Alle ayan u baryeynaa sheekheyna in uu dembi dhaaf siiyo khaatumada u wanaajiyo, maxaa yeelaya talo faro uguma jirto ,Daalibana wada hadal ayey kula jirtaa waxa loogu yeero beesha kufriga.
Jabhatu nusra waad arkeysaan xaalkeeda meesha uu maraayo, Xaq daradi ayaa ka soo baxdey AAwey shareecada ay sheegan jirtey? mise sheekh Ayman waa ka indho la’yahay qaladadkooda iyo in ay saxawaatka la midoobeen dhan walbo.
Jabhatu nusra maslaxad ayey u arkeysey in ay magaca alqaacidah ka hoos baxdo, si ay shacabka suuriya iyo beesha kufriga u raali geliso, maanta waxa isku hub aruursanaya jabhatu al nusra iyo xarakatu al axraar al shaam.
Shalay waxay ahaayeen xulufo la dagaalameysa mujaahidinta al dawla islamiyah, LAQDABO MEEL MAGAARTO
Allahu akbar wal cizatu lillah